Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Popular Jewelry
Markaad wax ka iibsato dukaankeena, oo qayb ka ah habka wax iibsashada iyo iibinta, waxaan ururinaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aad na siiso – sida magacaaga, cinwaankaaga iyo cinwaanka e-maylkaaga.
Sideen ku helnaa oggolaanshahaaga?
Haddii aan ku weydiisanno macluumaadkaaga shakhsiyeed sabab labaad, sida suuqgeynta, waxaan si toos ah kaaga weydiin doonnaa oggolaanshahaaga oo waxaan ku siin doonnaa fursad aad ku dhiciso.
Haddii ka dib marka aad doorato, aad beddesho maskaxdaada, waad kala noqon kartaa ogolaanshahaaga si aan kula soo xiriirno, si aan u helno uruurinta joogtada ah, isticmaalidda ama shaacinta macluumaadkaaga, wakhti kasta, adigoo nagala soo xiriiraya info@popular.jewelry ama noo soo dir boostada. ee:
255 Kanaalka Wadada New York New York US 10013
Hadaad jeceshahay inaad: marin u hesho, saxo, wax ka beddesho ama tirtirto wixii macluumaad ah ee adiga kugu saabsan, diiwaangeliso ashtako, ama aad si fudud u rabto macluumaad dheeraad ah la xiriir Sarkaalka Isku-Darka Asturnaanta ee info@popular.jewelry ama boostada ku soo dir